Habibiana : Mpianatra maty niharan’ny habibiana -
AccueilRaharaham-pirenenaHabibiana : Mpianatra maty niharan’ny habibiana
06/04/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mirongatra ny herisetra ara-nofo atao amin’ny vehivavy, izay tsy hanavahana salan-taona, ary matetika miafara amin’ny fahafatesana tato ho ato. Zazavavy, 14 taona, mpianatra amin’ny sekoly tsy miankina iray, no niharan’izany indray omaly, tokony ho tamin’ny 06 ora maraina, tao amin’ny fokontany Antanimanga, Kaominina sy Distrikan’i Bealanana. Tao anatin’ny lobolobo, tsy lavitry ny sekoly no nahitana ny razana ary ny fizahana nataon’ny dokotera tonga teny an-toerana no nahafantarana fa naolana, ary novonoina tamin’ny alalan’ny fanakendana ity tovovavy mbola tsy ampy taona ity avy eo. Io no noheverina fa nahatonga ny fahafatesany. Olona sendra nandalo vao maraina teny amin’ny faritra nahitana ny razana no nampandre ny sefom-pokontany. Ity farany indray avy eo no tonga nampilaza ny zandary avy ao Bealanana. Nidina teny amin’ny toerana nitrangan’ny loza ihany koa ireo zandary sy polisy, niaraka tamin’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny distrika vantany vao naheno ny zava-nisy. Razana efa nisandrahaka sy feno rà ny faritry ny fivaviany, ary tsy nanao takon-kenatra sy ankanjo ambany intsony no hitan’izy ireo teo amin’ity toerana ity. Raha ny fahitan’ny manodidina ihany koa dia tsy lavitra ny toerana nahitana ny razana no nanaovan’ireo nahavanon-doza izao habibiana tsy roa aman-tany izao. Raha ny fanadihadiana natao, sy araka ny nambaran’ny fianakavian’ny maty, dia nandeha nianatra ity tovovavy niharan-doza ity, ary niara-nody tamin’ny vehivavy iray.
Rehefa tonga teo amin’ny toerana, 300 metatra nahitana ny razana dia nisaraka izy roa ireo, ary nanohy ny diany irery ity zazavavy ity, tokony tamin’ny 08 ora alina tany ho any. Tamin’izay no noheverina fa nitrangan’izao fanolanana sy vonoan’ olona izao. Mandeha ny fikarohana ireo nahavanona izao habibiana izao, izay mendrika ny hampiharana ny sazy henjana indrindra. Fa ankoatra ity tranga tao Bealanana ity dia zazavavy kely vao 05 taona ihany koa no niharan’ny herisetra ara-nofo tao Ankirihiry, Distrikan’Ambato Boeny ny alahady 04 Aprily teo, tamin’ny 06 ora maraina. Tamin’ny fotoana tsy nahateo ny ray aman-dreniny, izay nandeha nivavaka no nanararaotan’ilay olona nanaovana ny filan-dratsiny. Tsy fantatra ny olona nahavita nanolana io zaza io hatreto. Rehefa tafaverina tao an-trano ihany koa ireo olon- dehibe dia tsy nahita olona, fa kosa nahatsikaritra avy hatrany ny rà teo amin’ny faritra maha-vehivavy io zazavavy kely io. Taorian’ny nitondrana ilay zaza teny amin’ny toeram-pitsaboana dia nihazakazaka nampandre ny mpitandro filaminana avy hatrany ihany koa ireo ray aman-dreniny. Mandeha ny fikarohana ireo tsy mataho-tody nanao izao fihetsika mamoafady izao. Tsy eken’ ny saina ny herisetra ara-nofo arahina vonoan’olona hatao amin’ny vehivavy indrindra fa ireo izay mbola tsy ampy, ary tsy afa-bela eo anatrehan’ny lalàna ny olona tratra manao ity herisetra amin’ny alalan’ny fanolanana ity .